Horudhac: Manchester United vs Burnley… (Red Devils oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato caawa) – Gool FM
(Manchester) 22 Jan 2020. Manchester United ayaa caawa oo Arbaco ah marti-gelinaysa naadiga Burnley, waxaana ay doonaysaa inay wadada guusha dib ugu soo laabato kaddib khasaaradii ay kala soo kulantay hoggaamiyeyaasha horyaalka Premier League ee Liverpool.
Dhinaca kale Clarets ayaa u safreysa garoonka Old Trafford kaddib markii ay soo gabagabaysay afar guuldarro oo xiriir ah oo ku soo gaartay horyaalka Premier League, markii ay guul soo laabasho ah ka gaartay Leicester City.
Taariikhda: Arbaco, 22 Jan 2020
Gooldhaliyaha ugu sarreeya ee Manchester United, Marcus Rashford ayaa la filayaa inuu ugu yaraan garoomada ka maqnaan doono muddo labo bilood ah kaddib dhaawac dhabarka ka gaaray.
Daafaca Man Utd ee Victor Lindelof ayaa shaki laga galinayaa kulankan sababo la xiriira xanuun, Eric Bailly ama Phil Jones ayaa qarka u saaran inay buuxiyaan booska uu ka maqnaan karo Lindelof.
Burnley ayaa la dhibtoonayn wax dhibaatooyin ah oo cusub kulanka ay u safrayaan Old Trafford, Johann Berg Gudmundsson ayaana kulankan ku dhow inuu ka soo kabsado dhaawac bowdada ah.
Ashley Barnes oo qalliin lagu sameeyey ayaana wajahaya maqnaano muddo bil ah uu garoomada seegayo.
>- Manchester United ayaa eegeysa inay minin iyo marti u garaacdo Burnley markii ugu horreysay tan iyo xilli ciyaareedkii 1975-76, maadaama lugtii hore ee ka dhacday garoonka Turf Moor ay 2-0 uga soo adkaadeen bishii hore.
>- Burnley ayaa guul la’aan ah 15-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay u mariyeen ama booqdeen Man United tan iyo markii ay guuleyseen 52 bishii September 1962 (7 Barbaro iyo 8 Guul).
>- Markii ay guuleysteen kulankoodii ugu horreeyay ee Premier League ee ay la ciyaarayaan Man United, Kooxda Burnley ayaan wax guul ah gaarin 10-kii kulan ee xigay ee ay ka horyimaadeen Red Devils tartankan, waxaana ay ka heleen 4 Barbaro iyo 6 Guuldarro.
>- Manchester United ayaa dhalisay afar gool mid kasta oo ka mid ah labadii kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka, iyadoo guul ka gaartay Newcastle (4-1) iyo Norwich (4-0). Markii ugu dambeysay oo ay dhalisay 4 gool ama wax ka badan saddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah ee ay garoonkeeda ku ciyaareen waxay ahayd bishii November sanadkii1997-kii.
>- Tan iyo markii uu Ole Gunnar Solskjaer uu noqday macallinka joogtada ah ee kooxda bishii Maarso sanadkii 2019-kii, Manchester United ayaa khasaaro la kulantay guuldarrooyin la mid ah guulaha ay gaareen horyaalka Premier League, waxaana ay uruursadeen 42-dhibcood, (11 Guul, 9 Barbaro iyo 11 Guuldarro).
>- Burnley ayaa ku guuldarreysatay inay dhaliso hal gool oo qeybta hore ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, iyadoo mid kasta oo ka mid ah 10-kii gool ee ugu dambeeyay ee horyaalka ay dhaliyeen qeybta labaad ee ciyaarta.
>- Xiddiga Man United ee Anthony Martial ayaa gool dhaliyey dhammaan saddexdiisii kulan ee horyaalka Premier League oo uu ka hortagay Burnley, inkastoo dhammaan saddexdaasi kulan ay ka dhaceen garoonka Turf Moor, saddex ciyaaryahan oo kala duwan oo Man United ah ayaa hal koox ka dhaliyey afartooda kulan ee ugu horreeya oo ay Premier lekague ku wajaheen, waana Ruud van Nistelrooy (vs Spurs iyo Newcastle), Wayne Rooney (vs Newcastle) iyo Robin van Persie (vs Stoke).
>- Tan iyo bishii Agoosto sanadkii 2017-kii, Chris Wood ayaa dhaliyey goolal badan oo horyaalka Premier League kana badan ciyaaryahan kasta oo ka tirsan Burnley waana 29 gool, Wood ayaa sidoo kale shabaqa soo taabtay kulankii Clarets ay barbaro 2-2 ku soo gashay garoonka Old Trafford xilli ciyaareedkii hore.
>- Kani waxa uu noqon doonaa kulankii ugu horreeyey ee Manchester United ay ku ciyaarto garoonkeeda Old Trafford kulan horyaalka Premier League oo uu kooxda hoggaaminayo macallin Ole Gunnar Solskjaer isla markaana uu dhaawac ku seegayo Marcus Rashford tan iyo safashadiisii ugu horreysay Premier League, Rashford ayaana dhaliyey goolal badan oo horyaalka ah ku dhaliyey garoonka kooxdiisa taasoo ka badan ciyaaryahan kasta oo kale eek a tirsan Red Devils waana 25 gool.
Guud ahaan kulammada caawa la ciyaarayo horyaalka Premier League & Tartanka Copa Del Rey... (Man Utd, Spurs, Real & Barca)